Masinina manamboatra milina fanamboarana masinina automatique mpamokatra masinina - Masinina fanamboarana masinina mandeha ho azy
Izy io dia tsipika famokarana mandeha ho azy tanteraka mba hanaovana sarontava taovam-pisefoana 95 loha, izay miainga amin'ny tariby orona, fantsom-bozaka mankany amin'ny sarontava. Mety miaraka amina asa fanampiny an'ny mpanonta jet-jet sy ny rafitra fanontana pad. Azo atao ny mahatratra ny takiana amin'ny mason'ny PM2.5. Izy io dia manana automatisation avo lenta sy miorina amin'ny avo output ary mampihena ny vidiny amin'ny famenoana vokatra indray mandeha.
Izy io dia tsipika famokarana mandeha ho azy tanteraka mba hanaovana sarontava taovam-pisefoana azo aforitra, izay avy amin'ny fantson-tariby orona, welding kofehy ka hatramin'ny maska ​​vita. Mety miaraka amina asa fanampiny an'ny mpanonta jet-jet sy ny rafitra fanontana pad. Azo atao ny mahatratra ny takiana amin'ny mason'ny PM2.5. Izy io dia manana automatisation avo lenta sy miorina amin'ny avo output ary mampihena ny vidiny amin'ny famenoana vokatra indray mandeha.
Masinina manamboatra elatra aotom-bozaka mandeha ho azy